I-Ron & Ethel's Cottage, ikhaya lebhetri elinomtsalane
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRhonda And Mary
Ikhaya laseNewfoundland elipholileyo lenkulungwane elihlala eBattery, lenye yezona mbono zibalaseleyo zezibuko laseSt.
Ifakwe kumnyango weSignal Hill National Historic Park, kwaye kumgama wokuhamba ukuya edolophini, iindawo zokutyela, iivenkile, ii-pubs kunye neendawo zembali ezikufutshane. Le ndawo isandula ukulungiswa ngekhitshi langoku kunye neendawo zokuhlambela ngelixa igcina umtsalane wekhaya losapho lwesintu. Indawo yokuhlamba impahla, iTV kunye ne-intanethi engenazingcingo kwisiza. Kwindlela yokupaka iyafumaneka.
I-Ron kunye ne-Ethel's Cottage ibekwe phezu kwamatye ebhetri iminyaka engaphezu kwe-100. Igcinwe ngothando iminyaka emininzi, kwaye ngoku ihlaziywe ngokutsha, ikhaya libandakanya igumbi lokuhlala elineembono ezintle zesixeko, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (kubandakanya iwasha kunye nesomisi), igumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba, kunye namagumbi okulala ama-2, elinye linegumbi lokuhlala elincanyathiselwe. Igumbi ngalinye lokulala libandakanya ibhedi ephindwe kabini enelinen ezisemgangathweni, i-shades emnyama kunye ne-drapes, kunye nemibono ye-harbor. Idesika ejikelezileyo iyakonwabela ukuvezwa okusemazantsi, apho iindwendwe zinokonwabela ukuphuma kwelanga phezu kwe-Narrows, kunye nokutshona kwelanga phezu kwesibhakabhaka sesixeko, lonke ixesha lonwabela ezona mbono zibalaseleyo zezibuko.
Indawo yokupaka esitratweni iyafumaneka.
Eli khaya limi kwiBattery eyimbali, indawo ebumelwaneni yamakhaya anqabileyo kwaye anemibala ebonakala ngathi ibambelele kumawa eSignal Hill. I-Northhead Walking Trail idlula ngomnyango wangaphambili, kwaye ikhokelela kwi-Signal Hill National Historic Park, i-Interpretation Centre, i-Cabot Tower kunye neendawo ezininzi zembali zomdla ngaphakathi kwepaki, kunye ne-Geo Centre kunye ne-Signal Hill Campus yeYunivesithi yeSikhumbuzo.
Ibhetri yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kwakho e-St. John's - iindwendwe zingaphakathi komgama wokuhamba ukuya kokunye kokutya okugqwesileyo, ukuthenga, indalo, kunye nobomi basebusuku ukuba iSt. Izinto ozithandayo ziquka iBattery Cafe ye-java yakho yasekuseni, iClassic Cafe yesidlo saseNewfoundland sesintu, iWater Street Pedestrian Mall yokuxhasa iivenkile zalapha ekhaya, iBannerman Brewery ngepinti yasemva kwemini, kunye neBellissimo Bistro ngesidlo sangokuhlwa esimnandi saseTaliyane -
konke kuhambo lwemizuzu eli-15 okanye ngaphantsi ukusuka kwindlwana. Iindawo zembali ezinje ngeSakhiwo seKoloniyali, iNdlu kaRhulumente, kunye namaGumbi nawo akumgama omfutshane.
Ngaba uyafuna ukuhlala kwaye wonwabele umbono ovela kwidekhi ye-cottage endaweni yoko? Thenga kwaye upheke ngokusentliziyweni yakho kwikhitshi esanda kulungiswa kunye negrosari evela eBelbin's Grocery, umgama wemizuzu eli-10 kuphela ukusuka kwindlwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Rhonda And Mary
Abanini bahlala eSt. John's, kwaye bafikeleleka iiyure ezingama-24/ngosuku ngexesha lokuhlala kwakho. Sifowuna kuphela okanye sithumele umyalezo.
URhonda And Mary yi-Superhost